Ahoana ny fomba hanamboarana iPhone tsy afaka mifandray amin'ny iTunes? - Ahoana No
Ahoana ny fomba hanamboarana iPhone tsy afaka mifandray amin'ny iTunes?
Indraindray rehefa manandrana mampifandray ny iPhone amin'ny iTunes ianao dia mety hitranga ny olana sasany. Hipoitra ny hafatra iray izay milaza hoe 'Tsy afaka mampifandray ny iPhone amin'ny iTunes'. Mety ho olana amin'ny fifandraisana ivelany io na olan'ny rindrambaiko. Miatrika olana mitovy amin'izany ve ianao? Andeha hojerentsika ny vahaolana samihafa amin'ity olan'ny fifandraisana ity.
Misy fotoana sasany izay tsy hifandraisan'ny iPhone amin'ny iTunes amin'ny Mac na PC. Ny sasany amin'ireo olana ireo dia tena mora ny manamboatra azy raha ny sasany kosa mandray dingana manokana hanamboarana. Ny antony mahatonga an'ity olana ity dia mety samy hafa amin'ny tranga roa. Amin'ity lahatsoratra ity dia hijery olana iraisan'ny rehetra sy tsy manam-paharoa isika ho an'ny PC sy Mac.
Tari-dàlana momba ny iPhone bebe kokoa:
Asehoy ny kisary isan-jaton'ny bateria amin'ny iPhone 12
Amboary ny iPhone tsy afaka mifandray amin'ny iTunes - Fomba maro
1. Zahao ny tariby taratrao
Imbetsaka ny olana dia mety amin'ny tariby jiro misy anao fa tsy ny iPhone-nao. Mampiasà tariby hafa ary zahao ny fifandraisana. Raha mifandray amin'ny tariby vaovao izy dia mety ho simba. Na raha mampiasa tariby USB an'ny antoko fahatelo ianao fa tsy ny tariby OEM tany am-boalohany, dia mety hiteraka olana eo amin'ny fifanarahana.
2. Zahao ny port USB
Betsaka ny fotoana mety misy basy ao amin'ny port USB izay tokony hesorina hanombohana fifandraisana mety. Olana tsotra izay azo vahana eo noho eo. Hamarino tsara fa ao anaty toe-javatra tsara izany ary manandrama mampifandray indray
3. Zahao ny tamba-jotra
Mety ho hita miharihary fa miharihary fa imbetsaka iTunes tsy mifandray amin'ny angona sela. Ka raha ny Wi-Fi ny fifandraisana dia tsy maintsy ovaina ao amin'ny menio fanovana. Indraindray izy io dia mety ho fifandraisana tambajotram-pifandraisana. Amin'izay dia miandrasa fotoana kely dia manandrama mampifandray indray.
4. Vaovao farany Apple USB Driver
Raha tsy nametraka na nanavao ny Apple USB Driver amin'ny PC ianao, dia azo inoana fa tsy hifandray amin'ny iTunes ny iPhone.
Avereno ampifandraiso amin'ny iPhone ny iPhone
Tsindrio havanana amin'ny bokotra Windows ary tsindrio ny Device Manager
Ankehitriny ianao dia afaka mahita ireo fitaovana azo entina. Mikaroha ny iPhone, kitiho eo aminy ary safidio ny Driver Driver
Tsindrio ny 'Search automatique ho an'ny rindrambaiko mpamily nohavaozina'
Rehefa tsy misy fanavaozana intsony dia vita ny fanavaozana
Ankehitriny ianao dia afaka mamerina ny PC ary mampifandray azy amin'ny iPhone
5. Atsaharo ny iPhone
Matetika kokoa dia mety hisy fianjerana rindrambaiko kely izay tsy mahomby ny fifandraisana. Ny famerenana amin'ny laoniny ny iPhone dia hamaha ireo fianjerana rindrambaiko tsotra izay mampiadana ny fizotrany.Mba hamerenana amin'ny laoniny ny telefaonao, tsindrio lava ny bokotra herinaratra ary atsofohy ny herin'ny. Azo inoana fa hamaha ny olanao io.
6. Vaovao farany ny rindrambaiko iPhone
Raha misy fanavaozana vaovao azo alaina ho an'ny iPhone dia misy ny mety hisian'ny olan'ny fifandraisana eo amin'ny iPhone. Ka zahao raha misy fanavaozana misy.
Mandehana any amin'ny fikirana
Tsindrio ny kiheba 'General'
Tsindrio ny fanavaozana ny lozisialy
Raha misy fanavaozam-baovao azo atao, dia haseho izany ary ny safidy fanavaozana dia ho azo tsindrio amin'ny fanavaozana.
Raha havaozina ny iPhone-nao dia tsy hisy safidy azo atao hanavao ny rindrambaiko.
7. Vaovao farany iTunes amin'ny PC
Ny fanavaozana ny iTunes dia dingana iray tokony hataonao raha miatrika olana ianao. Mandehana any amin'ny menio windows ary jereo raha misy fanavaozana ny lozisialy Apple. Raha misy fanavaozana azo atao dia hasehon'ny solosainao izany ary azonao havaozina. Raha tsy misy fanavaozana misy. Mamaha izay olana mifanentana amina kinova samihafa amin'ilay rindrambaiko.
Avereno apetraka amin'ny iTunes ny iTunes -
Raha tsy manampy amin'ny famahana olana ny fanavaozana dia mety mila esorinao amin'ny iTunes ny solosainao. Hamafana ilay programa:
Sokafy ny fihazakazahana amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra fikandrana amin'ny fitendry
Soraty ny 'control approx.cpl' ary kitiho ny fidirana
Ankehitriny dia hisokatra ny menio fandaharana, hikorisa midina, kitiho ny iTunes ary esory
Esory ny rindrambaiko Apple mifandraika hafa koa
Avy eo sintomy ny iTunes amin'ny fipihana eto .
Avy eo atsangano indray ny PC-nao ary apetraho iTunes. Na esory fotsiny ny iPhone-nao dia manandrama indray.
Atsaharo ny famerana -
Rehefa mampifandray ny iPhone amin'ny PC na Mac ianao dia mangataka alalana hitokisana ilay fitaovana. Raha nanakana ny iPhone tsy hatoky ianao dia tsy afaka miditra iTunes. Esory ny fameperana ray aman-dreny ary manandrama mampifandray indray.
Mba hanesorana ny fameperana ray aman-dreny
Sokafy ny fikirana
Mandehana any amin'ny Time Screen ary tsindrio ny famerana ny atiny sy ny tsiambaratelo
Arosoy ny fameperana
Vaovao farany Windows -
Ny dingana farany handalovana amin'ny PC-nao dia ny manamarina izay fanavaozana windows izay misy raha toa ka tsy nanamboatra ilay troubleshooting ny fanavaozana ny iTunes.
Vaovao farany Mac -
Toy ny manavao ny iPhone-nao dia manadino ny fanavaozana ny Mac iOS dia tena zava-dehibe. Azonao atao ny manavao ny Mac iOS amin'ny alàlan'ny
Tsindrio ny menio Apple ao amin'ny Mac
Tsindrio ny safidy 'fanavaozana ny rindrambaiko'
Raha misy fanavaozam-baovao azo atao, azonao atao ny manavao raha tsy izany ny rindrambaiko dia havaozina.
Ahoana ny fampifandraisana ny iPhone amin'ny Apple TV?
Misy lafin-javatra maro tokony hodinihina raha mampifandray ny iPhone amin'ny Apple TV ianao. Raha tsy mahomby ny fifandraisana dia misy zavatra vitsivitsy tsy maintsy andramanao.
Apetraho ny daty sy ora marina
Vaovao farany ny rindrambaiko Apple TV anao
Zahao ny fifandraisana amin'ny Internet
Ireto misy troubleshooting vitsivitsy izay azonao vahana eo noho eo ao an-tranonao. Na izany aza, raha tsy afaka mampifandray ny Apple TV amin'ny iPhone ianao dia mety te-hijery ny serivisy ho an'ny mpanjifa.
Ny olana amin'ny 'Tsy afaka mampifandray ny iPhone amin'ny iTunes' dia mety noho ny antony maro. Manomboka amin'ny olan'ny tambajotra ka hatrany amin'ny fanavaozana ny lozisialy, mety misy antony maro isan-karazany mandray anjara amin'ny famahana olana. Andramo ireo vahaolana etsy ambony raha miatrika ny olana amin'ny fampifandraisana ny iPhone amin'ny iTunes ianao. Raha tsy mandeha ny iray amin'ireo fomba etsy ambony ireo dia ny famerenana amin'ny laoniny ny iPhone ny vahaolana farany hataonao. Raha ny rindrambaiko iPhone mihitsy no olana dia tsy maintsy averina amin'ny alàlan'ny famerenana amin'ny laoniny fotsiny izany. Tena hamafana ny angona rehetra avy amin'ny telefaoninao izany fa raha io no safidy farany azonao atao dia azonao atao ny mamindra ny angona rehetra amin'ny fitaovana hafa ary mamerina ny iPhone-nao.
Sintomy ny VLC Media Player ho an'ny Mac
Ahoana ny fomba hijerena YouTube amin'ny fahitalavitra?
Midina ve ny Disney Plus? Zahao ny toeran'ny mpizara mivantana
ny fomba fanaovana lobaka roblox
lalao hilalaovana amin'ny maizina mampatahotra
lisitra lalao maimaimpoana twitch prime
fampiharana netflix maimaimpoana ho an'ny mac
ny fomba fitantanana pubg ho admin
fijerena horonantsary manga maimaim-poana amin'ny Internet